नेपाल आज | स्वामी अरूणको चेतावनी : गुरूलाई धोका दिनेहरूको अनिष्ट निश्चित छ
स्वामी अरूणको चेतावनी : गुरूलाई धोका दिनेहरूको अनिष्ट निश्चित छ
काठमाडौं । ओशो तपोवनका संरक्षक स्वामी आनन्द अरुणले आफ्नो आश्रमविरुद्ध नियोजित आक्रमण भइरहेको दावी गरेका छन् । उनले आफ्ना अनुयायीहरुलाई प्रवचन दिने क्रममा तपोवनको दूष्प्रचार भइरहेको बताएका छन् ।
प्रवचनका क्रममा स्वामी अरुणले भने, ‘यस्तो दूष्प्रचार गर्नेहरुले कतैबाट पैशा पाएर विरोध गरिरहेका छन् । तर यस्तोको अन्त्य दुःखद नै हुन्छ ।’
स्वामीबारे ओशो सन्यासी देव सुन्दर र अंशु कविराले केही गम्भीर आरोप लगाएका छन् । जसको प्रतिवादका रुपमा स्वामी आनन्द अरुणले केही जवाफी प्रवचन दिएका हुन् । उनले भने, ‘आफ्नै गुरुको माला बोकेर आफ्नै गुरुको आश्रम बन्द गराउन हिँड्नु जति ठूलो पाप केही हुँदैन ।’
स्वामीले घृणामा आधारित प्रचारहरु एक ओशो सन्यासीले गर्न नहुने बताएका छन् । तल्लो स्तरमा झरेर ओशो सन्यासी विरोधमा उत्रनु अशोभनीय भएकोले सबै मिलेर तपोवन जोगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘क्षणिक लाभ देखेर, एउटा मोटरसाइकलको लोभमा परेर आफ्नो धर्म बेच्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
आफ्ना गुरूको विरोधमा लाग्नेहरूले जन्मौं जन्मसम्म सुख नपाउने उनको ठहर छ । धर्मको इतिहासको पाना कोट्याउँदै उनले भने, ‘देवदत्तसँगै धेरैले बुद्धको विरोध गरे । उनलाई मार्ने दुष्प्रयास गरे, देवदत्तले बुद्धको संघबाटै पाँचसयवटा भिक्ष्नुलाई लिएर बोधगयाको आसपास राखे । तर पछि आत्महत्या गरेर मरे । जुदासले जिससको विरोध गरे । उनले पनि रुखमा झुण्डिएर मर्नुपर्यो । महावीरको साधकले महावीरकै विरोध गरेर रोग लागेर मर्नुपर्यो । आशोलाई शिलाले विरोध गरेपछि चारवर्ष जेलमा बस्नुप¥यो । यसको लामो लिस्ट छ । गुरु विरोधीहरूले केही पैसा पाउँछन् । यस्ता विरोधीको कमी छैन । आफ्नै गुरूको माला बोकेर गुरूको आश्रम भत्काउँदै हिँड्ने ? यो भन्दा ठूलो पाप अरू के हुन सक्छ ? यो बडो घृणीत काम हो ।’
आशो सन्यासी विरोध भएपनि ओशो सन्यासीजस्तो एक उचाईबाट आफूहरू लड्नुपर्ने उनले बताए । अहिले तपोवनमाथि लागेका आक्षेप र विरोधहरूका कारण उत्तेजित नहुन र यो घडीमा संगठित रहन उनले आफ्ना भक्तजनहरूलाई सुझाएका छन् । अबको कदम कसरी चाल्ने भन्दै उनले भक्तहरूलाई प्रश्न गरे, ‘अब तपाईंहरू संकल्प गर्नुस् यो तपोवन बचाउने हो कि होइन ?’ यसको लागि अहिले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई तपोवनप्रति जे जति असन्तुष्टि भएपनि त्यसलाई छोडेर एक्यवद्ध हुनुपर्ने उनले जनाए ।
विरोधीहरूलाई इंकित गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ, यस्तो काम नगरौं । म रहे या नरहे पनि यो आश्रम त रहनुपर्छ । तपाईंहरूको तपस्याले ओशोको सपना खडा भएको छ । रातदिनको मेहनत र तपस्याले यो खडा भएको छ । शान्तिपूर्ण रहौं, उत्तेजित रहौं, संगठित रहौं । केही व्यक्तिले तलब नपाएको गुनाशा पनि पोखेका छन् । यो तलबीहरूको होइन सन्यासी र त्यागीहरूको आश्रम हो । आफ्नो घरको सम्पत्ति लगाएर बनाएको आश्रम हो ।’ आश्रम उठाउनको लागि आफूले पनि फुटपाथमा ३ वर्ष किताब बेचेर बसेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले पनि जहाँ जान्छु त्यहीँ किताब बेच्छु । यसको पछाडि धेरै मित्रको धेरै त्याग छ ।’
जो शक्तिले तपोवन खडा गरे त्यही शक्तिले यसलाई बन्द गराउने कोसिस भइरहेको उनको बुझाइ छ । उनले थपे, ‘अरुण स्वामीको हत्या गरेर हामी चलाउछौं भन्ने मान्छेहरू पनि छन् । मलाई ढाल्नेमात्र होइन ओशोको सपनालाई ढाल्ने प्रयास भइरहेको छ । माला बनाउँदा मलाई धेरै थ्रेट आयो । खतराको काम भएन भने विश्वमा परिवर्तन आउँदैन । आशोको कामको विरोध यही आश्रमले थेगिरहेको छ । जसले यो आश्रम चलाउने सपना बुनेका छन् उनीहरूसँग तपस्या, त्याग र प्रेम नै छैन । यो काम गर्न सक्ने व्यक्ति भेटेमा म त मौनमा जान चाहन्छु ध्यानमा जान चाहन्छु ।’
अहिले उनीबारे भएको विरोधका कारण धेरै व्यक्तिले आफूलाई रातभरि फोन गरेर राम्ररी सुत्न पनि नपाएको गुनाशो उनले पोखे । ‘तपाईंको बारेमा यस्तो यस्तो समाचार आइरहेको छ भनेर धेरैले सोध्छन् । अब यसको हामीले उपाय खोज्छौं । उत्तेजनामा आएर कसैलाई गाली गरेर केही हुँदैन । हामी शालिनतापूर्वक यसको वैधानिक उपाय खोज्छौं । चुपो लागेर बस्दैनौं विश्वास राख्नुस् । ओशोको कार्यको लागि बाचेको छौं, मर्नुप¥यो भने उहाँकै कामको लागि मर्छौं । डराएर पछि हट्दैनौं ।’
स्वामी अरूणलाई लागेका मुख्य आरोप थिए : उनको शुक्रकिट प्रसादको रूपमा प्रयोग हुने गरेको, आश्रममा हाउजिङको व्यापार गरेको, यौनजन्य गतिविधीलाई प्रोत्साहन गरेकोे, कर नतिरहेको, अवैध हतियार राखेको अादि । तर यी विषयमा भने आफ्ना भक्तहरूका सामु उनी मौन नै रहे ।
यि विषयहरुकाे सम्बन्धमा अाेशाे तपाेवनले स्वामी अानन्द अरुणले ध्यान शिविरमा दिएकाे प्रवचनबाट नेपालअाजले समाचार बनाएकाे तर प्रवचनकाे समाचार बनाउने अनुमति नलिएकाे भन्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरेकाे छ । अाेशाे तपाेवनले उजुरीमा याे समाचार हटाउन र काउन्सिलमा अाग्रह गरेकाे छ । समाचारकाे कुनै खण्डन प्राप्त भइसकेकाे छैन ।